दीगो विकास लक्ष्य-३ बारे युवा डाक्टरको भूमिकामाथि चर्चा
बैशाख २७, २०७४ बुधवार २३:३५:३१ प्रकाशित
काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्र संघको दीगो विकास लक्ष्य – ३ 'हेल्थ एन्ड वेल विइङ' प्राप्तिका लागि सरोकारवालाहरुको भूमिका सम्बन्धमा राजधानीमा अन्तर्क्रिया भएको छ। लक्ष्य-३ मा आधारित भई युवा डाक्टरहरुसँग अन्तर्क्रिया गरिएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्नु पर्नेगरी १७ वटा दीगो विकास लक्ष्य तोकेको छ। त्यसको लक्ष्य-३ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी बुँदाहरु राखिएका छन्।
'दीगो विकास लक्ष्य-३ प्राप्तिका लागि मेडिकल डाक्टरहरुको भूमिका' विषयक अन्तर्क्रियामा उपत्यकाका विभिन्न मेडिकल कलेजका विद्यार्थी र विभिन्न अस्पतालका डाक्टरहरु गरी एक सय जना सहभागी थिए। युनाइटेड नेसन्स युथ एन्ड स्टुडेन्ड एसोसिएसन नेपाल (युनिसान) ले पुल्चोकस्थित संयुक्त राष्ट्र संघको सभाहलमा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियामा डा. जितेन्द्र भण्डारी र डा. रेशा खनालले लक्ष्य-३ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकूलपति डा. अर्जुन कार्कीले युवा डाक्टरहरुले सुरुदेखि नै इथिक्समा बसेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। डा. कार्कीले युवा डाक्टरहरुको आचरण, डाक्टर र बिरामीबीचको सम्बन्ध आदि विषयमा बोलेका थिए। उनले भने, 'डाक्टरले पढ्ने बेला बिरामीमार्फत धेरै कुरा सिक्छन्। त्यसबेला बिरामीलाई कति दुःख परेको हुन सक्छ। बिरामीहरुले दुःख सहेर डाक्टरहरुलाई सिक्ने मौका दिएका हुन्छन्। त्यो बिरामीले डाक्टरमाथि लगाएको गुन हो। त्यसैले बिरामीमाथिको दायित्व डाक्टरले कहिल्यै भुल्नु हुँदैन।' डा. कार्कीले कार्यक्रममा सहभागी युवा डाक्टरहरुले राखेका जिज्ञासाहरुको सम्बोधन गरेका थिए।
यस्तै, नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले दीगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत स्वास्थ्यका लक्ष्यहरु पूरा गर्न एसोसिएसन प्रतिबद्ध रहेको बताए।
कार्यक्रममा नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष शंकर घिमिरेले लक्ष्य पूरा गर्नका लागि सरकारले बनाएका कानुनभित्र रहेर काम गर्न औषधि व्यवसायीहरु तयार रहेको जनाए।
दीगो विकास लक्ष्यमा लक्ष्य–३ पूरा गर्न राज्यको भूमिका, स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका र सञ्चार माध्यमको भूमिका उल्लेख गरिएको छ। स्वास्थ्य खबरपत्रिकाका प्रधान सम्पादक अनिल न्यौपानेले लक्ष्य प्राप्तिका लागि मिडियाले खेलिरहेको भूमिका र पूरा गर्नुपर्ने दायित्वबारे प्रस्ट पारेका थिए।
अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा युनिसानका अध्यक्ष डा. प्रकाश बञ्जाडेले डाक्टर, सञ्चार माध्यम र सरोकारवाला पक्ष मिलेर मात्र दीगो विकास लक्ष्यमा तोकिएका स्वास्थ्यका लक्ष्य पूरा हुनसक्ने बताए। उनले यी लक्ष्य पूरा गराउन युवा डाक्टरहरुको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा जोड दिएका थिए।